I-Tonquin's Rest Guest Suite e-Astoria, e-Oregon
(361 okushiwo abanye)
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Robin And Garrett
Ngo-99 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
I-Tonquin's Rest iyindawo enhle yangasese esitezi esiphezulu sekhaya lama-Victorian lango-1903 endaweni enokuthula yase-Astoria yase-Uppertown. Ikhaya lisendaweni yokuhamba ngezinyawo ukuya ePier 39, i-Astoria Riverwalk kanye nezindlela zokuhamba izintaba. Kuwuhambo lwemizuzu engama-30 noma ukushayela imizuzu emi-5 ukuya enkabeni yedolobha i-Astoria kanye nokuhamba ngokushesha kwemizuzu engama-25 ukuya ogwini. Buka inyamazane izulazula ngemuva kwendlu njengoba uphuza ikhofi lakho lasekuseni endaweni yakho yangasese.
Lena yindlu yezivakashi yangasese esitezi esiphezulu sekhaya lethu. Kunamasethi amaningana ezitebhisi zokufinyelela ku-suite. Kunemibhede emibili ethokomele yosayizi wendlovukazi eyigwebu kanye nosofa owengeziwe ogoqeka endaweni yokulala yosayizi ababili egumbini lokuhlala. Kunemicamelo eminingi eyengeziwe nezingubo zokulala zokunethezeka kwakho.
Kukhona igumbi lokugezela eligcwele elinobhavu we-jacuzzi kanye neshawa yokuhamba ngezinyawo. Sinikeze ngeshampoo, okokulungisa, ukugeza umzimba kanye nebhavu lokugeza le-jacuzzi.
Ikhishi lihlanganisa i-mini-fridge/freezer, i-microwave, i-toaster, i-Keurig coffee maker, i-French press, igedlela lamanzi ashisayo, i-blender ne-washer ne-dryer. Sicela uqaphele ukuthi awukho usinki noma ububanzi ekhishini.
Kukhona i-TV, isidlali seDVD esinama-DVD kanye ne-Roku ene-Netflix egumbini lokuphumula. Kukhona nesidlali serekhodi kanye nokukhethwa kwamarekhodi ongawalalela.
Kukhona i-balcony yangasese ebheke izingadi.
Ngenxa yobhubhane lwe-coronavirus, siqikelela ukuthi sihlanzeke ngokujulile futhi sibulale amagciwane ezindaweni ezithintwa njalo phakathi kokubhukha. Sobabili sigonyelwe ngokugcwele i-Covid-19 kanye nomkhuhlane.
I-wifi esheshayo – 99 Mbps
I-HDTV engu-40" ene- I-Netflix, I-Roku
5.0(361 okushiwo abanye)
5.0 · 361 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-361
Indlu isendaweni yase-Uppertown empumalanga ye-Astoria. Ukusuka ekhaya ungahamba uye ezitolo nezindawo zokudlela ze-Pier 39. Ungakwazi ukufinyelela ngokushesha i-Astoria Riverwalk ezokungenisa edolobheni ngemizuzu engama-30 noma ngaphezulu. I-Riverwalk ebheke empumalanga izokuyisa endaweni ebukekayo kakhulu yomfula futhi idabule endaweni yase-Alderbrook.
Ibungazwe ngu-Robin And Garrett
Sihlala ekhaya futhi sitholakala ezivakashini njengoba kudingekile futhi singafinyelelwa ngohlelo lokusebenza lwe-Air BnB noma ngokungqongqoza emnyango wethu ongezansi. Sithanda ukunikeza iziphakamiso ngezinto ongazenza edolobheni ngakho ulethe imibuzo yakho!
Sihlala ekhaya futhi sitholakala ezivakashini njengoba kudingekile futhi singafinyelelwa ngohlelo lokusebenza lwe-Air BnB noma ngokungqongqoza emnyango wethu ongezansi. Sithanda uk…
URobin And Garrett Ungumbungazi ovelele